Wholesale Yucera dental ST zirconia block ho an'ny cad / cam system / zirconium nify ho an'ny mpanamboatra laboratoara CAD ary mpamatsy | Yurucheng
Rafitra mifanentana sy habe azo zahana ST zirconia block:
Yurucheng dia manana ekipa teknika matihanina matanjaka, 60% ny mpikambana ao aminy dia manam-pahaizana momba ny biolojika zokinjokiny ary manam-pahaizana manokana momba ny CNC..
Ny sakana tsirairay dia hatao anaty boaty misy ployfoam miaro ao anatiny. Eny ivelan'ny baoritra lehibe iray misy menaka tsy misy rano.
Sakanana feno boaty baoritra sy ployfoam ao anatiny. Avy any ivelany ny boaty lehibe iray sy ny famahan-drano tsy misy rano. Halefanay ny vokatra aorian'ny 15 andro aorian'ny fahazoana ny fifanarahana ara-dalàna sy ny vola eo anoloana.
Teo aloha: Super Clear Zirconia Disc 98mm Multi-layer Zirconia Block ho an'ny fitaovana Crown Dental mifanentana misokatra CAD CAM
Manaraka: Yucera 1200MPa Hery miondrika HT zirconia sakana nify sy fotsy fotsy banga ho an'ny laboratoara fitaovana nify
Vidin'ny block Zirconia amin'ny nify